Osimiri nke Almería | Akụkọ Njem
Almería dị na obodo Andalusia ma nwee ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite na kilomita nke oke osimiri mara mma. Dị ka ọ bụ oge ọkọchị na okpomoku a na - apị aka taa anyị ga - etinye uche anyị osimiri ya, maka onye ọ bụla nke zoro ụkwụ na ha, osimiri ndị a na-agaghị echefu echefu.
Coastsọ oké osimiri ahụ dị n’akụkụ ụfọdụ na Gulf of Almería, ihe karịrị kilomita 35, ọ bụ ezie na e nwere ngụkọta nke 200, ụfọdụ nwere boulevards, ndị ọzọ nwere coves, ájá niile na mmiri dị jụụ, ọ bụ ezie na ọnụ ọnụ ugwu ndị dị elu adịghị akọ. E nwere ngụkọta nke 16 osimiri, dịgasị iche na ogo na ọdịdị ala ha, ọrụ na nnweta, mana ka anyị lee nke kachasị mma na nke akwadoro.
1 Osimiri Almería
2 Poniente osimiri
3 Levante osimiri
4 Osimiri nke Cabo de Gata-Níjar
Osimiri ndị a bụ n'ime ihe a na-akpọ okwu ọchịchị, Ọbara dum nke Almería kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ụsọ osimiri a o nwere kilomita iri atọ na ise ihe dị ka isii n’ime ha nọkwa n’obodo ahụ.
Enwere ọtụtụ osimiri dị iche iche onye ọ bụla ọzọ ma ịnọ n'obodo bụ osimiri na ọrụ, kwadebere nke ọma ịnabata ndị ọbịa. Anyị nwere ike ịkpọ osimiri nke Las Salinas, La Fabriquilla, Almadraba de Monteleva, Ndị na-ewu ewu Osimiri Zapillo, na San Telmo ma ọ bụ Torregarcía.
Osimiri Almadraba de Monteleva nwere ájá dị nro ma dịkwa mma ma bụrụ akụkụ nke ogige ntụrụndụ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwa agbọghọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka nnụnụ na-ekiri ya, ọ bụ nnukwu ebe n'ihi na ọtụtụ ụdị na-abịa nọrọ ebe a n'oge oyi. Ọ dị mita 660 n’ogologo ma nwee obosara nke mita 30.
Ọ na-atụle ọkara-mepere emepe na-enweghị a mkpagharị ya mere na ọ bụ kama siri ike. Aja dị ọcha ma sọfụ dị jụụ. Bus ga-eji bọs ma ọ bụ ụgbọ ala rute ebe ahụ. Osimiri Zapillo na-ewu ewu nke ukwuu n'ihi na ọ dị nso na obodo ahụ. Ọ bụ mpako ịbụ a Blue Flag osimiri. Ọ dị puku mita abụọ n’ogologo, nwee mkpagharị mara mma na aja ojii. Mmiri ya dị jụụ nke mere ọtụtụ mmadụ ji eme mmiri. San Miguel nke Cabo de Gata Ọ bụ osimiri ọzọ akwadoro na Almería. Ọ bụ obodo nke otu aha ahụ nwekwara Blue ọkọlọtọ.
Na nkezi, na kilomita abụọ na ọkara n'ogologo na 100 n'obosara, na ọ bụ ihe ịtụnanya nke aja ọcha. Echefuola m idetuo ụfọdụ ndị ọzọ: the Nueva Almería osimiri, osimiri Retamar, nke Ndị Toyo, nke ego. Chọsie ike!
Poniente osimiri ha bụ nke ájá ojii ma saa mbara ma dịgasị iche iches Dị ka ụsọ mmiri nwere gravel, e nwere ụsọ osimiri nwere aja na aja ndị ọzọ ebe osisi na-agba mmiri na mmiri. Enwere ezigbo ifufe ka ndị njem nleta chọrọ ịme ihe na-abịa ebe a ikuku ikuku mmiri, kitesurfing na sọọfụ.
N'ime obodo nke Arda e nwere iri na atọ kilometa ogologo coastline na mara mma osimiri na ruo oge ụfọdụ ugbu a aghọwo touristy: na El Carboncillo osimiri, nke Ọnụ ọgụgụ, na de la Caracola, La Sirena Loca na San Nicolás.
Crazy mermaid ahụ? Kedu aha: ọ bụ osimiri Blue Flag ma ọ meriekwa akara ngosi Q maka Njem Nleta. Ezigbo mma maka ụsọ osimiri mepere emepe nke mita 730 n'ogologo na nkezi banyere mita 70 n'obosara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iche iche na ala gbara osimiri okirikiri, ihe na-atọ gị ụtọ, mgbe ahụ ị kwesịrị ịga n'ụsọ osimiri Levante. Coastsọ osimiri dị n'akụkụ a nke Almería na-aga Murcia na ịma mma ya bụ n'ihi eziokwu ahụ gafere Cabo de Gata Natural Park.
E nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke ma ọ bụ ndị na-amaghị nwoke kpamkpam, zoro ezo uwe ojii, Oke osimiri gbara ahịhịa na ahịhịa na-adịghị mma ... Otutu ịma mma emeela ka akụkụ ndị dị n'ụsọ oké osimiri mepee nke ọma site na echiche ndị njem nleta. Ya bụ, enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ ,ụ, ụlọ nri na ụlọ ahịa ndị ọkachamara na njegharị na egwuregwu osimiri. Ugbua na obodo nke Carboneras E nwere usoro osimiri ndị ama ama, asatọ na mkpokọta, ha niile akwadoro ma jupụta naanị kilomita 17.
Ebe ị ga-ahụ El Corral beach, La Galera beach, osimiri Algarrobico (ya na ụlọ nkwari akụ ahụ nke wetara ọtụtụ ngagharị iwe), nke Ndị Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ El Ancón, nanị ịkpọ aha ole na ole. Playa de los Muertos mara mma nke ukwuu n'ihi na ọ dị n'etiti ugwu, n'ime Cabo de Gata Natural Park. Ọ bụ ọdọ mmiri zoro ezo na nkume jupụtara, na-enweghị obodo ọhụụ. Maka nke a, ị ga - enweta naanị ụkwụ. Gwọ ọrụ bụ osimiri mechiri emechi, nke ikuku na-echebe ma nwee mmiri na-acha anụnụ anụnụ na turquoise dabere na oge nke ụbọchị.
Ọ bụ osimiri siri ike maka ụkwụ yabụ yikwasị akpụkpọ ụkwụ dịka ọ bụ pebbles. Enweghị ájá, ma n'ụsọ osimiri ma ọ bụ n'ụsọ oké osimiri. Ala a na-agbada ngwa ngwa ma uru ọ bara bụ na mmiri dị oke mmiri. Ọ dị mita 950 n’ogologo na 80 n’obosara. Ọ mara mma ma nwee nche anwụ n'ihi na ahịhịa adịghị.
Ọ bụrụ na ụsọ oké osimiri amalite site n'ụsọ osimiri a, ọ ga-ejedebe na nke El Algarrobico, dịkwa n'ime ogige ntụrụndụ ma kewaa n'ọnụ mmiri Alías. Ọ bụ osimiri jupụtara na ya, ụlọ ole na ole mara mma ma maa mma. Ma ama, a ghaghị ikwu ya, n'ihi na ọ bụ nke na-apụta na ihe nkiri Lawrence nke Arabia.
Osimiri nke Cabo de Gata-Níjar
Nijar nwere ọtụtụ osimiri, otu maka uto ọ bụla anyị nwere ike ikwu. Enwere coves coame dị ka Rajah, Yellow, Coal, Half Moon, Onyeisi, Nwa agbọghọ ma ọ bụ Onye Ukwu. Ha niile n'ime ime obodo San José. N'ọnọdụ ọ bụla, na San José, e nwere ụsọ mmiri ma ọ bụghị naanị coves na dịka n'etiti osimiri Levante enwere nke pụtara na sinima, otu ihe ahụ na-eme ebe a: ụfọdụ n'ime gị pụtara na ihe nkiri Indiana Jones. Dị ka ihe atụ, Playa del Arco, San José beach, Mónsul beach.
Osimiri ndị ọzọ dị Nijar ma anyị na-ekwu okwu banyere nnukwu osimiri, ọ bụghị coves. Enwere osimiri mara mma Rodalquilar mara mma, ya na coves ndị gbara ya gburugburu, na ụsọ mmiri nke obodo Agua Amarga na La Isleta del Moro.
Nke bu eziokwu bu na obodo obula nwere oke osimiri ya na-ewu ewu, ya mere, naanị ihe anyi ga-ekpebi bu udiri ezumike nke anyi choro: nke n’adighi nma ma o bu nke di nwayọ? Obodo mepere emepe ma obu nke ohia? , Ogologo ma ọ bụ ogologo n'etiti ugwu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Almería » Osimiri Almería